“ချစ် သော ကေ”- အပိုင်း(၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “ချစ် သော ကေ”- အပိုင်း(၃)
“ချစ် သော ကေ”- အပိုင်း(၃)
Posted by aye.kk on Jul 7, 2012 in My Dear Diary | 8 comments
ဦး နှင့် အ တူ နှစ် ယောက် သား ၊ အိမ် ပေါ် သို ့ရောက် လာ ပြီး ၊ အ ဒေါ် က အ နား ယူ ရန် ပြော ပါ သည် ။
ရေ ချိုး ခန်း ထဲ ဝင် ခါ ၊ ခြေ လက် မျက် နှာ ဆေး ကြော ပြီး ၊ အ ဒေါ် ပြင် ဆင် ထား သည့် အိပ် ရာ ခင်း ဖြူ ဖြူ ဖွေး ဖွေး ၊ ခြင် ထောင် ဖြူ ဖြူ မွှေး မွှေး လေး ထဲ ဝင် ပြီး လှဲ လိုက် ရ သ ဖြင့် ၊ အ ဒေါ် အား ကျေး ဇူး တင် မိ ခဲ့ ပါ သည် ။
ည နေ ခင်း က အ ဒေါ် ချက် ကျွေး သော ၊ ငါး ကတ် က တစ် နှင့် ပဲ င ပိ ပေါင်း (အ ချို)၊ ကြမ် မ ဆိုင် နှင့် ပဲ ပြား ဟင်း ချို ၊ ဝက် သား ပဲ ဆီ (ကြာ ညို ့) ဖြင့် ချက် ထား သည့် လက် ရာ များ က မိဘ လက် ရာ ထက် မ လျော့ ပါ။
ည အိပ် ရာ ဝင် ၊ ဘု ရား ရှိ ခိုး စဉ် အ ဒေါ် ကို ပါ ဆု တောင်း မေ တ္တာ ပို ့ပေး ခဲ့ ပါ သည် ။
ခ ရေ ပန်း ရ နံ့လေး အား ၊ တ အား နှစ် သက် သည် ဟု အစ် ကို သု ခ အား ပြော ပြ မိ ခဲ့ သ ဖြင့် ၊ ခ ရေ ပင် အောက် အုတ် ခုံ လေး တွင် တင် နေ သော ခ ရေ ပန်း လေး များ အား ၊ အစ် ကို သု ခ မှ ကောက် ယူ ကာ လက် ထဲ ထဲ့ ပေး ၍ ရှပ် အ င်္ကျီ အိပ် ကပ် လေး ထဲ တွင် ထည့် ထား ခဲ့ ပြီး ၊ ည ဝတ် အ င်္ကျီ ထုတ် ယူ ပြီး အ ဝတ် ပြီး လဲ သည့် အ ချိန် ၊ ခ ရေ ပန်း လေး များ အား စ က္ကူ ဖြင့် ထုတ် ပြီး ခေါင်း အုံး လေး အောက် တွင် ထည့် ရင်း ၊ အစ် ကို သု ခ နှင့် အ လာ ပ ၊ သ လာ ပ စ ကား များ ကို ပြန် စဉ်း စား ယင်း အ တွေး နယ် ချဲ့ခါ ၊ အိပ် ပျော် သွား ပါ သည် ။
မ နက် မိုး လင်း တော့ ၊ အ ဒေါ် ပြင် ထား သည့် ကော် ဖီ နှင့် မုန့် အား သုံး ဆောင် ပြီး ၊ ရန် ကုန် တွင် ရုံ တင် ထား သည့် ဆဲ ဗင်း နှိုက် အင် ဂျ ပန် ရုပ် ရှင် ကား ကောင်း သ ဖြင့် ၊ လက် မှတ် ဘွတ်ခ် ကင် ကြို တင် မှာ ထား ပေး ၍ ၊ ရုပ် ရှင် သွား ကြည့် ရန် အ ဒေါ် ၏ စီ စဉ် မှု ဖြင့် မောင် နှ မ နှစ် ယောက် သား ၊ အစ် ကို ဝမ်း ကွဲ နှင့် အစ် မ ယောင်း မ ဖြစ် သူ တို ့နှင့် အ တူ တူ လိုက် သွား ကြည့် ရန် အ ဒေါ် ခွင့် ပြု ခဲ့ သ ဖြင့် သွား ကြည့် ကြ ပါ သည် ။
သမ္မတ ရုပ် ရှင် ရုံ တွင် ၊ ရုံ တင် ထား သော မြင် ကွင်း ကျယ် ဆေး ရောင် စုံ ဇတ် ကား ကြီး ဖြစ် ၍ လွန် စွာ ပင် ကြည့် ၍ ကောင်း လှ ပါ သည် ။ ဂျ ပန် နိုင် ငံ သို ့၊ (၇) ရက် တာ မျှ လာ ရောက် လည် ပတ် သည့် အ င်္ဂ လန် နိုင် ငံ ၊ အိမ် ရှေ့ စံ မင်း သား လေး နှင့် ဂျ ပန် နိုင် ငံ ၊ ကား စ ပါယ် ယာ မ လေး တို ့၏ တွေ ့ဆုံ ချစ် ကြိုး သွယ် ခဲ့ သည့် ဂုဏ် ရည် မ တူ အချစ် ဇတ် လမ်း ကား လေး ဖြစ် ပါ သည် ။
ဇတ် လမ်း က မ ငို ပဲ နှင့် မ နေ နိုင် ၊ တ ရှူတ် ရှူတ် နှင့် နှပ် များ ပင် ထွက် လာ သည် အ ထိ ငို မိ ခဲ့ ပါ သည် ။ ရှက် လည်း မ တတ် နိုင် ပါ ၊ ဝမ်း နည်း စိတ် က ထိန်း မ ရ ၊ ပါ လာ သော လက် ကိုင် ပု ဝါ က တ ထည် လုံး ရွှဲ ရွဲ နစ် သွား ပါ သည်။
အစ် ကို သု ခ က….
သူ ့အ င်္ကျီ အိပ် ကပ် လေး ထဲ က ၊ လက် ကိုင် ပု ဝါ တ ထည် အား ထုတ် ပေး ရင်း မ ငို နဲ့ လေ…။
ဒါ က ရုပ် ရှင် ဘဲ ဟာ ဟု သ တိ ပေး စ ကား ဆို ပါ သည် ။ ရုပ် ရှင် ပြီး ၍ မီး လင်း လျှင် ကိုယ် ငို ထား တာ သူ များ မြင် လျှင် ရှက် စ ရာ ဟု ပြော ပါ သည် ။ ငို ချင် စိတ် ကို ဖျောက် ၍ ရုပ် ရှင် ကို ပင် မ ကြည့် ရဲ သည့် စိ်တ် ဖြစ် လာ ပါ သည်။
ဆက် မ ကြည့် တော့ ပဲ ၊ ခုံ နောက် မှီ တွင် ခေါင်း မော့ ပြီး မျက် စေ့ ကို မှိတ် ထား ပစ် လိုက် မိ ပါ သည် ။
အစ် ကို သု ခ က…
ကေ့ ကို ကြည့် တော့ ရှပ် အ င်္ကျီ က အ မြဲ ဝတ် ထား တတ် သည် ။ စ တိုင် က ယောက် ကျား လေး လို လို နဲ ့စိတ် က တော့ အ ရမ်း နု တာ ပဲ ဟု ပြော ပါ သည်။
စိတ် က မ နု ပါ ဘူး …
ကြမ်း လွန်း လို ့တောင် အိမ် မှာ နာ မည် ရ ထား တာ…
ကွန် မြူ နစ် မ တဲ့ လေ…
အစ် ကို သု ခ က မ သိ ပဲ လျောက် လျောက် ပြော နေ တယ်…
ကေ့ အ ကြောင်း ကို သိ လည်း မ သိ ပဲ နဲ ့…နော်။
လူ အ ကြောင်း ပေါင်း မှ သိ တဲ့ ။
အစ် ကို သု ခ ကေ့ အ ကြောင်း သိ ချင် ရင် (၃) နှစ် တောင် ၊ စောင့် ကြည့် ကြည့် ပါ လား…
အစ် ကို သု ခ ၊ တ ခါ တည်း လက် လန် သွား စေ ရ မည် ဟု
အ ငေါ် တူး တူး နှင့် ပြန် ပြော ပစ် လိုက် မိ ပါ သည်။
ကေ က ငယ် ငယ် ထဲ က သ နား တတ် တာ ..
သ နား စ ရာ မြင် ရင် ကေ့ စိတ် ထဲ ခံ စား လို ့မှ မ ရ နိုင် ဘူး….
အဲ ဒါ ကြောင့် ငို တာ ပါ..။
နောက် ဆို ဒီ လို မျိုး ကား ဆို လိုက် မ ကြည့် တော့ ပါ ဘူး..
အ ဖေ နဲ့ လာ ရင် ဒီ လို မျိုး ကား တွေ ဘယ် တော့ မှ လာ မ ပြ ဖူး ဘူး ..
ဂျိန်း စ် ဘွန်း ၊ ဘ ရု စ လီ ၊ ဂျက် ကီ ချမ်း ကား တွေ ၊ တ ရုတ် သိုင်း ကား တွေ ပဲ လာ လာ ပြ တာ..
ဒီ လို မျိုး ကား က ပ ထ မ ဆုံး ကြည့် ဘူး တာ ပဲ ဟု ပြော ပြ မိ ပါ သည် ။
အစ် ကို သု ခ က …
အ ပြင် မှာ အဲ လို ဇတ် လမ်း မျိုး လေး ဆို ရင် ..
အဲ ဒီ မိန်း က လေး နေ ရာ မှာ ဆို ရင်..
လမ်း ခွဲ နိုင် မှာ လား ဆို ပြီး ..ရုတ် တ ရက် မေး လိုက် ပါ သည် ။
မ ခွဲ နိုင် ပါ ဘူး ဟု ချက် ခြင်း ဖြေ သ လို ဖြစ် သွား တော့..
အစ် ကို သု ခ တ ယောက် သ ဘော ကျ ပြီး ရယ် ပါ တော့ သည် ။
အ ငိုက် တွင် ဖမ်း မေး လိုက် ခြင်း ဖြစ် ၍ ၊ ကေ တ ယောက် အ ရှိုက် တော့ ထိ မိ သွား ခဲ့
ပါ သည် ။။
“ ကွန်မြူနစ်မ ” ဆိုတဲ့
ကောင်းခန်းရောက်ရင် တို ့လို ့တန်းလန်းနဲ ့မို ့နောက်အပိုင်းမှာတော့ ကိုသုခ နဲ ့ကေ တို ့ရဲ ့ချစ်ဇါတ်လမ်း စလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ ့။
ကြည့်ရဒါ အစ်ကို သုခ ဆိုတဲ့လူကြီးက ကြည့်ရတာ တော်တော်မလယ်မဝယ်ရှိပုံရတယ်
ကျုပ်သာဆို ဦးမလာခင် ဟိုခရေပင်အောက်မှာ ကတည်းကနည်းနည်းပါးပါး
( G Talk ဂျီးဂဒေါ့နော အားရပါးရဝေဖန်ကြည့်ဒါ )
အစ်မ အေး အပြော အရဆိုရင် တစ်ဖက်သတ် ကြိုက် တဲ့ ဇာတ်လမ်းလား။
ကိုသုခ လဲ အသဲကွဲ ဦးမယ် ထင်ရဲ့။
အစ်မအေး ပြောတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို သိတယ်။
ကျွန်မ ခပ်ငယ်ငယ် ဘဲ ရှိသေးတယ်။
Seven nights in Japan – မင်းသားက Michael York (ရိုမီယို နဲ့ ဂျူးလိယက် ကားထဲ မှာ ဂျူးလိယက် အစ်ကို လုပ်တာ – အဲဒီမှာ လူကြမ်းပေါ့)
နောက်ကြီးလာတော့ Princess and the Photographer မှာတော့ မင်းသား ကို အရမ်းသဘောကျတာ။
မင်းသမီးက ဥရောပ နိုင်ငံတစ်ခုက Princess မင်းသားက ဂျပန် ဓာတ်ပုံဆရာ။
ဇာတ်လမ်းလေး က တကယ်လှတယ်။
ဒါလဲ ကွဲ တဲ့ ဇာတ်ပါ။
သီချင်းလေး ကို ကြိုက်လို့ ကက်ဆက် မှာ သွင်းထားတာ ဒီ နေ့ အထိ စိတ်ကူးပေါက်ရင် နားထောင် တုန်း။ :-)
မင်းသား က မြန်မာပြည်မှာ ပြခဲ့တဲ့ တစ်ရာ့တစ်ကြိမ်မြောက် ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်း ဇာတ်လမ်းတွဲ ထဲ က မင်းသား။
အစ်မ Post ထဲ မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်း လာပြီး ရွှီး နေတာ စောဒီး နော်။
အီး…. ပြောရအုန်းမယ် ကြုံလို့ ခုထိ princess and photographer နဲ့ seven nights in japan ဆိုတဲ့ ကားကို မကြည့်ဖူးသေးဘူး။ အမေတို့ ပြောတာတော့ ကြားဖူးတယ်။
မင်းသားက တစ်ရာ့တစ်ကြိမ်မြောက်ကားထဲက ဆိုတော့ မလှဘူးပေါ့။ ခုမှ သိတယ်။
အရီးပေးတဲ့ လင့်လေး ဖွင့်ကြည့်အုန်းမယ်။ ကိုးနတ်ရှင် မပါစေဆုတောင်းတယ်။
အဲ့ဒီ ရုပ်ရှင်လေးတွေ ဒေါင်းလို့ရမဲ့ လင့်လေးများ ရှိရင် ကောင်းမယ်နော်။ ကြည့်ဖူးချင်လို့။ ပြောသာပြောရတာ ဒီကော်နက်ရှင်နဲ့တော့ မရလောက်ပါဘူးလေ။
လမ်းခွဲဖို ့ဆိုရင် လမ်းလွှဲတောင် မမောင်းချင်ပါဘူးဗျာ။နောက် တာပါ ဗျာ။
အတွင်းစိတ်က မိန်းကလေးလို နူးညံ့နေတာကို မြင်မိတယ်။